आमा दुई नायिका बन्दैछन, ऋचालाई ताली प्रियंकालाई गाली किन ? – Dainik Samchar
August 11, 2021 549
काठमाडौं । अभिनेत्रीद्वय प्रियंका कार्की र ऋचा शर्मा आमा बन्ने तयारीमा छन् । प्रियंकाले सामाजिक सञ्जालमा आफू गर्भवती भएको जानकारी दिएको साता दिन नपुग्दै ऋचाले पनि आफू आमा बन्न लागेको खबर सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
प्रियंकाले आफ्नो ठुलो पेट देखाउँदै उक्त पेटमा अभिनेता पति आयुष्मान् देशराज जोशीले चुम्बन गरेको तस्बिर पोस्ट गरिन् । तर ऋचाले भने आमालाई सम्झँदै एक बिरुवामा पति दीपेक्ष विक्रम राणासँग मिलेर पानी हाल्दै गरेको तस्बिर पोस्ट गरिन् । यी दुवै अभिनेत्रीहरू आमा बन्ने अन्तिम समय नजिक आइसकेको छ ।
अभिनेत्री प्रियंका केही समय अघि ‘बेबी सावर’ गरिन् । विवाह अघि आफ्ना साथीहरूसँग थाइल्यान्डमा ब्याचलर पार्टी गर्दा उनलाई खुकुरी रमले प्रायोजन गरेको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘बेबी सावर’को तस्बिर राख्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया आए ।
अर्का प्रयोगकर्ता दिनेश गिरीले बच्चाले पेट भित्रै कमेडी सिक्न सक्ने भनी ठट्टा गरेका छन् । ऋचाले अहिलेसम्म ‘बेबी सावर’को तस्बिर राखेकी छैनन् । बरु उनले सासू आमासँग खानेकुरा पकाउँदै गरेको तस्बिर राखेकी छन् ।
Prevओलीले नपत्याएका कुलमानले केहि बेरमा नियुक्ति पत्र पाउदै
Nextकस्तो अचम्म ! लम्जुङमा १३ बर्षमै बच्चा जन्माइन
मण्डपमा बिहेको कार्य नसकिँदै बेहुलालाई समेत तानेर बेहुली डान्समा उत्रिएपछि… (भिडियो)